Madax Qubays, Shaandhaynta Qubeyska, tubbada Qubeyska - Xinpaez
Khabiirka maqaarka & timaha
A Pioneer of Fitness Fitness
Raaxada Matte madow dhammeeya, shaandhooyin laba jibbaaran
Xinpaez: Khabiir ku takhasusay daaweynta biyaha tan iyo 2010 Shiinaha Xinpaez qalabka sifaynta biyaha Co., Ltd. waa soo saare caan ah oo ku takhasusay cilmi baarista, horumarka, wax soo saarka iyo iibinta madaxyada qubeyska, tuubbooyinka qubeyska, miirayaasha biyaha, qaybaha miiraha biyaha, iyo qalabka jikada. Waxaa la aasaasay sanadka 2010 iyadoo la diiwaan galiyay raasamaal dhan 6 milyan yuan (RMB). Marka loo eego hagida qiimaha leh ee Agaasimahayaga, 'Mr. WenLian Qiao ', waxaan ku gaarnay guulo aad u weyn degelkan.
WAAD NAGA SOO XIRIIRI KARAAN